Interesting – Dainik Nepal News
November 17, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरून्, हेर्नुस् मंसिर १ गते आईतबारको राशी अनुसार तपाईंको भाग्य
November 16, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरून्, हेर्नुहोस् कार्तिक ३० गते शनिबारको राशी अनुसार तपाईंको भाग्य
मेषः– लगनशिल भई काम गर्नु होला । अपरान्ह पूर्वको समय अनुकुल देखिन्छ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् भने साँझपख समय प्रतिकुल बन्नेछ । बन्न लागेका काममा अवरोध आउन सक्छ । अनावस्यक विषयलाई लिएर चिन्ता बढ्नेछ । अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । सहयोगी मित्र टाढा हुनेछन् । लगानीमा जोड नदिनु होला । वृषः– पूर्वान्ह समय […]
November 15, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on शुक्रबार यस्ता काम गर्दा चम्किनेछ तपाईको भाग्य
काठमाडौँ । साताको अन्तिम दिन अर्थाथ शुक्रबारलाई काम सुरु गर्दा राम्रो बारका रुपमा हेरिन्छ । धर्मशास्त्र अनुसार शुक्र ग्रह भोग विलास, सांसारिक सुख, प्रेम, मनोरंजन, व्यवसाय, श्रीमतीको कारक ग्रह हो । त्यसैले आफ्नो श्रीमतीलाई कष्ट दिनु, कुनैपनि प्रकारको फोहोर वस्त्र लगाउनुले शुभ अशुभ फल दिने गर्छ । शुक्रवारको दिन यी कामहरु गर्नुहोस् राम्रो मानिन्छ । […]
November 15, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on तपाईंको दिन शुभ होस्, हेर्नुस् आजको राशीफल
पोखरामा भेटिए ज्यानभरी पैसै–पैसा टालेको मान्छे, २८ किलोको ज्यानमा २० किलो सिक्का कसरी धान्छन्हे ? हेर्नुहोस भिडियो
November 14, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on पोखरामा भेटिए ज्यानभरी पैसै–पैसा टालेको मान्छे, २८ किलोको ज्यानमा २० किलो सिक्का कसरी धान्छन्हे ? हेर्नुहोस भिडियो
राम बहादुर परियार पोखरा हेमजामा करिब ५० बर्ष अघि जन्मेका हुन् । उनी अहिले सिक्का बाबाको नामबाट चिनिदै आएका छन् । ५० बर्ष काटेका र जम्मा २८ किलो तौल भएका उनले लगाउने कपडामा २०६ देशका सिक्का टाँसेर हिड्छन् । सिक्काको मात्र तौल करिब २० किलो छ । २८ किलोको ज्यानले दैनिक २० किलोको कपडा लगाएर […]
November 14, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on बिहिबारको दिन भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता काम, नत्र जिन्दगिभर पछुताउनु पर्ला
बिहिबारलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहिबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने मानिन्छ । तर बिहिबार केही काम गर्न भने निषेध गरिएको छ ।शास्त्रमा बिहिबार कपाल नुहाउन नहुने उल्लेख छ । खासगरी महिलाहरुले बिहिबार कपाल नुहाउनु अशुभ मानिन्छ ।बिहिबारको दिन […]
November 13, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरून्, हेर्नुहोस् कार्तिक २८ गते बिहीवारको राशी अनुसार तपाईंको भाग्य
November 13, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on जुम्ल्याहा दाजुभाइसंग आलियाले खिचेका तस्विर बन्यो भाइरल
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित नायिका हुन् आलिया भट्ट । बेलाबोमा चर्चामा आउने आलिया यतिबेला पनि पुन चर्चामा आएकी छिन् । कहिले उनले लगाएको ड्रेसका कारण चर्चामा हुन्छिन त कहिले प्रेमका कारण चर्चामा आउने गर्दछिन् । बलिउडमा पछिल्लो समय आलिया भट्टले आफूलाई नम्बर वान नायिकाका रुपमा उभ्याएकी छिन् । केही समयअघि रिलिज भएको फिल्म ‘कलंक’ ले […]
November 13, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on बुधबारको दिन यी काम गर्नुहोस् , मिल्नेछ सुख शान्ति र फलिफाप
काठमाडौँ । हिन्दुधर्मअनुसार बुध ग्रहलाई विष्णुको अवतार मानिन्छ । बुधको दिशा उत्तर हो भने उत्तर दिशामा कुबेरको स्थान रहेको हुन्छ ।यदि तपाईको घरमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको छ भने बुध ग्रहलाई पुजा गर्नुहोस् । बुधबार विष्णु भगवानको पुजा आरधना गर्नाले विद्या, धन तथा व्यापारिक उन्नतिको साथै बुढेसकाबाट टाढा रहन सकिन्छ । बुधलाई महत्वपूर्ण तथ्यहरु वाणीको […]
November 13, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on गुरुवागाउँ मेला : भेडा जुधाएर बहादुरी
– भेषराज बस्नेत राँझा, २७ कात्तिक: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१९ वसुदेवपुरका घनश्याम बारी गाउँबाट तीन वटा भेडा लिएर गुरुवागाउँ मेला पुग्नुभएको छ । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–५ बेलहरीमा प्रत्येक वर्ष लाग्ने मेलामा नियमित ३० वर्षदेखि भेडा जुधाउन आउने गर्नुभएका घनश्याम यो वर्ष आफ्नो भेडाले लडाइँ जित्नेमा आशावादी देखिनुहुन्छ । “लडाइँ जितेपछि सयको पाँच सयका दरले तुरुन्तै मूल्य बढिहाल्छ”, […]
November 13, 2019 November 13, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरून्, हेर्नुहोस् कार्तिक २७ गते बुधवारको राशी अनुसार तपाईंको भाग्य
मेषः– अरुलाई विश्वास गरेर काम गर्ने अवस्था रहने छैन । कुनै क्षेत्रमा पनि जर्वजस्ति नगर्नु होला । बढि महत्वकाँक्षी योजना अगाडि बढाउदा नोक्सान धेरै वेहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अनावस्यक काममा समय खर्च हुनेछ । श्रमको मूल्य पाइने छैन । मिथ्या आरोप लाग्न सक्छ सर्तक रहनु होला । नयाँ क्षेत्रमा लगानी नबढाउनु होला । […]
November 12, 2019 November 12, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरून्, हेर्नुहोस् कार्तिक २६ गते मंगलवारको राशी अनुसार तपाईंको भाग्य
November 11, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरून्, हेर्नुहोस् कार्तिक २५ गते सोमबारको राशी अनुसार तपाईंको भाग्य
वृषः– गलत संगतको शिकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ विचार पु¥याउनु होला । मानसिक एवं शारीरिक दूर्वलता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहन सक्छ । आत्मबल बढाउनु पर्ने देखिन्छ । इज्जतको ख्याल राखेर अगाडि बढ्नु होला । उपकारी काम हुनेछन् । फलदायी यात्रा हुनसक्छ । अरुको कल्याणमा आफ्नो भविष्य नदेख्नु होला । मिथुनः– आएको अवसर […]
आइतबारको दिनमा सूर्य भगवानको पूजा गर्दा यी दुई मन्त्रको जप गर्नुहोस्, मिल्नेछ सुख शान्ति
November 10, 2019 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on आइतबारको दिनमा सूर्य भगवानको पूजा गर्दा यी दुई मन्त्रको जप गर्नुहोस्, मिल्नेछ सुख शान्ति
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार सबेका लागी महत्वपूर्ण हुन्छ । साताकै पहिलो दिन भएकाले मानिसहरुले आफ्नो नयाँ योजना अनुसार यो दिनलाई सदुपयोग गर्ने योजना बुनिरहेका हुन्छन् भने यो दिन खासमा भगवान् सूर्य देवताको दिनका रुपमा पनि हेरिन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आजको दिन सूर्य देवताको मन्त्र जप तथा पूजाको विशेष महत्व रहने गर्दछ […]